ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) | MoeMaKa Burmese News & Media
>ူပည်ပရောက် သာသနာူပြ ဆရာတော်မဵား အားလုံးစုစည်ူးပီူးမန်မာူပည်သာသနာ ဆက်လက်ထနြ်းကားရေး သံဃာ့ဥသ္တွောင်အဖြဲႚုကီး ဖြဲႚစည်း
Posts Tagged ‘ ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) ’
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – ၀တ္ထုမဖတ်သည့် ပညာတတ်
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – ၀တ္ထုမဖတ်သည့် ပညာတတ် (မိုးမခ) သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၈ ညတညတွင် မိတ်ဆွေရင်းတယောက်နှင့် ကော်ဖီသောက်ကာ စကားစမြည်ပြောကြရင်း ၀တ္ထုမဖတ်သည့် လူတွေရှိကြကြောင်း ပြောလိုက်မိသည်။ သူက ရယ်ရင်း ဒါဟာ သူတို့လိုလူမျိုးတွေကို...
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – အကြောင်းညီညွတ်ရင် (မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၈နွေညတစ်ညတွင် ပူအိုက်သောကြောင့် အိပ်ရာမ၀င်နိုင်ကြသေးဘဲ သံပရာဖျော်ရည်သောက်ရင်း အောက်ပါအတိုင်း စကားစမြည် ပြောဖြစ်ကြလေသည်။ အဖေ။ ။ သားရဲ့ညီလေးက ပုဆိုးမ၀တ်ဘူးကွ။ ပြောလို့လည်း မရပါဘူးကွာ။...
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – အလျော့ အနေအထားနဲ့ အတိုး (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်မှာ သုံးနှစ်သုံးမိုးမက ပညာသင်ပြီး ထိုထိုတက္ကသိုလ်တွေက ပေးတဲ့ ဘွဲ့အသီးသီးကို ယူကြဖို့အတွက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကျင်းပမည့်နေ့ရက်ဆိုတာကို သတင်းစာကနေ ကြေငြာထားရာမှာ...
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) ● အကြော်မပါရင် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇ သိပ်မကြာသေးသော တစ်ခါတုန်းက ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြု နေသော ရန်ကုန်မြို့ကြီးသားတစ်ယောက် ရှိသည်။ ရန်ကုန်သားဟု သုံးစွဲကြပါစို့။...
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) ● ထိုင်၍ရသော ခုံများ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၈၊ ၂ဝ၁၇ ● နိဒါန်း စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်တွင် မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ယောက်နှင့် အမှတ်မထင်တွေ့လျှင် ထိုတစ်ယောက်မှ သူထိုင်နေ သော စားပွဲဝိုင်းရှိထိုင်ခုံတွင်...
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) ● မြို့ကြီးသို့ …. (မိုးမခ) မေ ၂၆၊ ၂၀၁၇ ရန်ကုန်သားတစ်ယောက် ၂၀၁၇ ဧပြီ ၂၈ တွင် ရန်ကုန်အလည်ပြန်ရောက်သည့်အခါ ရန်ကုန်မြို့ကြီးသည် သူ့အတွက် မေး ခွန်းပုစ္ဆာဖြစ်နေသည်။...
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) ● ဘာနဲ့ပက်မှာလဲ ဘယ်လိုပက်မှာလဲ …. (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၇ “ကျနော် အပြင်ထွက်ပြီး ရေသွားပက်လိုက်ဦးမယ်” “အေး သွားကွ၊ ဒါနဲ့ ဘာနဲ့ပက်မှာလဲ မင်းဟာက ရေပုံးလည်းမပါ၊...